एचआइभीबाट दिवङ्गत भएकाहरुको सम्झनामा दीप प्रज्वलन, हेर्नुहोस् ८ तस्विर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एचआइभीबाट दिवङ्गत भएकाहरुको सम्झनामा दीप प्रज्वलन, हेर्नुहोस् ८ तस्विर
आर्यन धिमाल , १४ मङ्सिर २०७५
काठमाडौं। 'नो योर स्टाटस' अर्थात आफ्नो अवस्था जानौं भन्ने नारासहित ३०औं विश्व एड्स दिवस डिसेम्बर १ तारिखका दिन अर्थात भोली शनिबार विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाईदैछ।
एड्स दिवसको पूर्वसन्ध्यामा माइती नेपालले सदा झैं यो वर्ष पनि काठमाडौंको गौशाला चोकमा दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
एड्सका कारण दिवङ्गत भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्ति गर्न र एच आइ भि संक्रमण विरुद्ध जनचेतना सिर्जना गर्न माइती नेपालले दीप प्रज्वजलन गरेको हो।
कार्यक्रममा माइती नेपालका कर्मचारी र पुनस्र्थापना गृहमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो। महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान अन्तर्गत विश्व एड्स दिवसलाई महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिने गरिन्छ।
माइती नेपालको सन्दर्भमा मानव बेचबिखिनबाट प्रभावित भएका र एज आइ भि संक्रमणका कारण एड्स भइ दिवङ्गत भएका चेलीहरुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्ने दिनको रुपमा यस दिवसलाई बुझ्ने गरिन्छ।